Pixelmator Pro oo loogu talagalay Mac markale nuska qiimaha wuxuuna balan qaadayaa inuu hagaajinayo shaqadiisa abuurka | Waxaan ka socdaa mac
Pixelmator Pro oo loogu talagalay Mac markale nuska qiimaha wuxuuna balan qaadayaa inuu hagaajinayo shaqadiisa abuurka
Waxaa laga yaabaa in tartanka ugu xoogan ee Photoshop uu hada yahay Pixelmator Pro. Waxaan dhihi karnaa waxay ka ciyaaraan isla hal horyaal, labaduba waxay la jaan qaadayaan M1 iyo labadaba oo leh matoorro awood u leh qaabeynta. In kasta oo ay run tahay in midda koowaad ay leedahay khibrad dheeraad ah oo hubaal inay aad u fiican tahay, haddana ma quudhsan karno waxtarka Pixelmator oo weliba hadda nooga tagaya barnaamijkeeda Kalabar qiimaha iyo sharad ku saabsan hagaajinta qalabkeeda caan-baxa
Waqti ka waqti ayaa horumariyayaasha Pixelmator Pro ee loogu talagalay Mac waxay naga yaabinayaan qaar ka mid ah faa'iidooyinka ku jira astaamaha barnaamijka ama qiimaha. Munaasabaddan, waxaan dhihi karnaa taas labadaba waanu ka hadlaynaa. Waxaan leenahay qiimo dhimis iyo balan qaad ka yimid shirkada oo sheegaya in mudo gaaban aan yeelan doono shaqeyn cusub oo wax weyn ka tareysa barnaamijka.
Maaha kii ugu horreeyay Waqtiga waxaan leenahay qiimo dhimis qiimaha nuska ah, sida markan. Marka hadda haddii aad go'aansato inaad iibsato barnaamijka waxay kugu kacaysaa 21, 99 euro, halkii ugu dhawaan 44 ay ku kacayso si joogto ah.
Laakiin sidoo kale waa inaan dhahnaa qeybta xigta ee barnaamijka, 2.1 waxaan lahaan doonnaa sheeko cusub oo muhiim ah marka loo eego qalabkeeda jarista ee ay ku shaqeyso Mashiinka Barashada. Shaqeynta cusub waxay falanqeyn doontaa halabuurka sawirrada iyadoo la adeegsanayo algorithm barashada mashiinka waxayna ku siin doontaa talo soo jeedin sida ay u noqon karto sawir u samee si aad uga dhigto mid soo jiidasho leh. Marka uguyaraan waa laga sharaxay boostadaada.
«Iskusoo wada wada duuboo, waxaan dooneynaa shaqadan madadaalo"Horumariyayaashu waxay yiraahdaan, iyagoo intaa ku daray in arjigu" uu bixinayo aragtiyo kaladuwan oo loogu talagalay hawl tifaftiran sawir guud. Kuma cusba xudduudahan sida Pixelmator Pro horeyba loogu soo daray astaamaha barashada mashiinka sida Xallinta Sare, taas oo balaadhinaysa sawirada iyadoon lumin fiiqnaanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Pixelmator Pro oo loogu talagalay Mac markale nuska qiimaha wuxuuna balan qaadayaa inuu hagaajinayo shaqadiisa abuurka
AirPods 3 iyo Apple Music Hi-Fi Talaadada, May 18?
Apple TV + waxay xaqiijineysaa xuquuqda filimka masiibada musiibada ee Denzel Washington